Nezvedu - KELU SHARE LIMITED
KELU SHARE LIMITED yakadyiwa muna 2003 uye inowana muDongGuan Guta rePearl River Delta ndipo panotangira nzvimbo dzekuvandudza hupfumi muChina. Iyo nharaunda mukana unoita kuti tiwane yakakwana yekupa cheni, yakakura yekutsigira chishandiso uye yakavandudzika traffic network.
Iine ruzivo rwakawandisa hwakaunganidzwa, KELU yakagadzira kambani yakabatanidzwa iyo inosanganisa R&D, Gadzira, Kutengesa uye Kubatira pamwe. Isu tinopa anokwanisa emakambani akawanda anozivikanwa pamba nekune dzimwe nyika. Kuchengeta "Hutano hwekutanga" uzivi, KELU inokoka vatengi vese vatsva uye vakuru vepasirose pamusoro penyika mukuvandudzika.
Chii chinonzi KELU inyanzvi mune?
Iwo matekinoroji makuru KELU anayo ndeaya Metal Injection Kuumba (MIM) uye CNC Machining.
Isu tinopa akasiyana siyana masimbi anoshandiswa kune akawanda maindasitiri anosanganisira Medical zvishandiso, Machina, Sport zvishandiso, Elektroniki, Mauto chirongwa, Ormet uye dzimwe nzvimbo dzakakwirira-kuguma.
Metal jekiseni kuumba (MIM) hushanduri tekinoroji iyo inobatanidza Plastion Injection Kuumbwa, Polymer chemistry, Powder metallurgy uye Metallic zvinhu sainzi. Ichi chiitiko chesimbi simbi inoshongedzwa nesimbi yakakanyiwa svutugadzike nehuremu hwezvinhu zvakaumbwa kuti zviite “chikafu” uye vozoumbwa nekuumbwa. Zvigadzirwa zvekupedzisira zvaizove zvinobuda mushure mekukanganiswa, kusanganisa mashandiro.
MIM inogona kuburitsa chikamu ipo pazvinonetsa, kana kutomboita, kunyatsogadzira chinhu uye kuona yakanyanya kunyatsoremerwa, kukwirira kwakanyanya, kuomarara uye huwandu hwezvikamu zvidiki-zvidiki.
Computer kuverenga kwenhamba (CNC) ndiko kuseenzesa kwemashini zvishandiso kuburikidza nemakomputa kuita pre-yakarongedzwa zvakatevedzana yemirairo yemuchina wekudzora.